★မြန်မာ့အလင်း★: Allah၏ တပည့်ပီသ၍ အစဉ်အလာမပျက်…လမ်းဘေးမှာ ခွေးသေ.. ၀က်သေ ဖြစ်ကြပြန်ပြီ
Allah၏ တပည့်ပီသ၍ အစဉ်အလာမပျက်…လမ်းဘေးမှာ ခွေးသေ.. ၀က်သေ ဖြစ်ကြပြန်ပြီ
အခုအချိန်မှာ မဟာဂရုဏာရှင် Allah ဟာ ရေကိုအသုံးပြုပြီး ကုလားတွေကို အမျိုးပြုတ်အောင် သတ်နေပါတယ်။ Allah ကို ကိုးကွယ်တဲ့ ကုလားတွေကလည်း သတ်ဖြတ်တဲ့နေရာမှာတော့ ဆရာကောင်း တပည့်ပီသ ပါပေတယ်။ ရေကြီးပြီး တိုင်းပြည် ပျက်လုနီးနီးဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာ မွတ်ဆလင်ညီအစ်ကို အချင်းချင်း . . . ဒီနေ့မှာ . . . ဗုံးခွဲပြီး သတ်ကြပြန်ပြီ။ ကျုပ်တို့ ဗုဒ္ဓဘာသာတွေ . . . လက်ဖျားခါရလောက်အောင်. . . မွတ်ဆလင် အချင်းချင်း အဲလောက်အထိ ချစ်ခင်နေကြတာပါ။ အဲလောက်ချစ်တော့လဲ… ကုလားတို့၏ အစဉ်အလာနဲ့အညီ လမ်းဘေးမှာ ခွေးသေ ၀က်သေ .. သေကြပြန်ပါပြီ။ လောကကြီးမှာ ဖြစ်ပျက်သမျှဟာ ဖန်ဆင်းရှင် Allah ရဲ့ အလိုဆန္ဒအတိုင်းသာ ဖြစ်တယ်ဆိုပဲ။ သတင်းလေးဖတ်လို့ Allah တစ်ကောင်ကို ကျေးဇူးထပ်တင်လိုက်ပါဦး။